Ndị ọka iwu na-enweta azụmaahịa mba ụwa - Law & More
GQUKWUO KA S B ORR A BB ORR A AKA? Jụọ maka enyemaka iwu
Onye ọka iwu inweta azụmahịa
Ọ bụrụ n’inwe ụlọ ọrụ nke gị, enwere ike oge ọbụla ịchọrọ ịkwụsị ọrụ ụlọ ọrụ ahụ. N'aka nke ọzọ, ọ ga-ekwe omume na ịchọrọ ịzụta ụlọ ọrụ dị adị. N'okwu abụọ ahụ, inweta azụmaahịa na-enye ngwọta.
Inweta azụmaahịa bụ usoro dị mgbagwoju anya, nke nwere ike iwere ọnwa isii rue otu afọ iji mezue. Ọ bụ ya mere ọ dị mkpa ịhọpụta onye ndụmọdụ nzụta ahịa, onye nwere ike inye gị ndụmọdụ ma kwado gị, mana ọ ga - anara gị ọrụ. Ndị ọkachamara na Law & More ga - eso gị rụọ ọrụ iji chọpụta ụzọ kachasị mma maka ịzụta ma ọ bụ ire ụlọ ọrụ ma nwee ike inye gị nkwado iwu.
Okporo ụzọ maka inweta azụmahịa
Ọ bụ ezie na inweta azụmaahịa ọ bụla dị iche, dabere n'ọnọdụ nke ikpe ahụ, enwere usoro ụzọ zuru ụwa ọnụ a na-agbaso mgbe ịchọrọ ịzụ ma ọ bụ ree ụlọ ọrụ. Law & MoreNdị ọkàiwu ga-enyere gị aka ọ bụla usoro nduzi a.
"Law & More itinye aka na ya nwere ike imetuta nsogbu nke onye ahia ya. "
Nzọụkwụ 1: pkwadebe maka nnweta
Tupu inweta azụmaahịa nwere ike ime, ọ dị mkpa na ị kwadebere nke ọma. N'ime usoro nkwadebe, a na-edozi ihe ịchọrọ na ọchịchọ gị. Nke a metụtara ndị otu chọrọ ịre ụlọ ọrụ na ndị otu ha chọrọ ịzụ ụlọ ọrụ. Nke mbụ, ọ dị mkpa ikpebi ọrụ azụmaahịa ụlọ ọrụ na-etinye, na ahịa nke ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ yana ego ole ịchọrọ ịnata ma ọ bụ kwụọ ụgwọ maka ụlọ ọrụ ahụ. Naanị mgbe nke a doro anya, nnweta ahụ nwere ike ịbụ nke a kpachapụrụ anya. Mgbe emechisiri nke a, aga-enyocha ụlọ ọrụ iwu ụlọ ọrụ yana ọrụ nke onye isi (s) na ndị na-ekenye ndị ọzọ. A gha aghaghi ikpebi ma ihe o choro ka inweta ya buru ya otu ntabi anya. N'ime usoro nkwadebe ọ dị nnukwu mkpa ka ị ghara ikwe ka mmetụta gị na-eduzi gị, kama na ị ga-eme mkpebi ndị echebara echiche. Ndị ọka iwu na Law & More ga - enyere gị aka na nke a.
Nzọụkwụ 2: ịchọta onye zụrụ ahịa ma ọ bụ ụlọ ọrụ
Ozugbo edeputara ọchichọ gị nke ọma, ihe ọzọ ị ga - eme bụ ịchọ onye zụrụ ahịa kwesịrị ekwesị. Maka ebumnuche a, enwere ike ịdepụta profaịlụ ụlọ ọrụ na-amaghị aha, na ndabere nke ịhọrọ ndị azụtara kwesịrị ekwesị. Mgbe achọtara onye mere ezigbo mkpebi, ọ bụ ihe mbụ dị mkpa ịbanye na nkwekọrịta na-abụghị ngosipụta. Na-esote, enwere ike ibute ozi banyere ụlọ ọrụ ahụ maka ndị nwere ike ịzụ ya. Mgbe ịchọrọ iweghara ụlọ ọrụ, ọ dị mkpa na ịnata ozi niile dị mkpa gbasara ụlọ ọrụ ahụ.
Kwụpụ 3: mkparịta ụka nyocha
Mgbe achọtara onye zụrụ ahịa ma ọ bụ ụlọ ọrụ nwere ike iweghara na ndị ọzọ ejirila ibe ha agbanweta ozi, oge eruola ịmalite mkparịta ụka nyocha. Ọ bụ omenala na ọ bụghị naanị ndị nwere ike ịre ahia na ndị na-ere ahịa nọ ya, kamakwa ọ bụla ndị ndụmọdụ, ndị na-ahụ maka ego na ndị na-azụ ihe.
Kwụpụ 4: mkparịta ụka
Mkpakorita izu maka inweta azụmaahịa ahụ mgbe onye zụrụ ahịa ma ọ bụ onye na-ere ahia nwere ezigbo mmasị. Ọ na-atụ aro ka ndị ọka mmụta nweta ọkachamara na-eburu mkparita uka a. Law & MoreNdị ọkàiwu nwere ike ịkwado maka nnọchitere gị maka ọnọdụ iwe were na ọnụahịa ahụ. Ozugbo mmadụ abụọ ahụ mechara nkwekọrịta, a na-ewepụta akwụkwọ ozi ebumnuche. N’akwụkwọ ozi ebumnuche a, ekwesịrị usoro na usoro inweta na ego iji kwado ya.
Kwụpụ 5: Mmecha nke inweta azụmaahịa
Tupu edee nkwekọrịta azụmaahịa ikpeazụ, a ga-enyocharịrị ịdị uchu. Na ntinye nke a, a na-enyocha izizi na izu oke nke data ụlọ ọrụ niile. Encerụ ọrụ kwesịrị ya dị ezigbo mkpa. Ọ bụrụ na ịdị uchu kwesiri ya eruteghị emezighi emezi, enwere ike ị nweta nkwekọrịta azụmaahịa ikpeazụ. Mgbe ndị ọkwa depụtara maka ịnye ndị nwe ya, agafeela mbak ya ma kwụọ ụgwọ ịzụta, nnweta ụlọ ọrụ ahụ.
Kwụpụ 6: iwebata
Ntinye aka nke onye na-ere ahia anaghị akwụsị ngwa ngwa mgbe ebugharị azụmahịa ahụ. A na-ekwenyekarị na onye na-ere ahia na-ewebata onye ga-anọchi ya ma kwadebe ya maka ọrụ ahụ. Ekwesiri ikwurita oge oge mmejuputa a tupu oge mkparita uka a.
E nwere ọtụtụ ụzọ isi kwado ego inweta azụmaahịa, nke ọ bụla nwere uru na ọghọm ya. Enwere ike ijikọ ego ndị a. May nwere ike ịtụle nhọrọ ndị a maka itinye ego maka inweta azụmaahịa.
Onwe ego nke onye na azu ahia
Ọ dị mkpa inyocha ego ole ị nwere ike itinye ma ọ bụ chọọ inye aka tupu ụlọ ọrụ ahụ enweta. Na omume, ọ na - esikarị ike ị mezue inweta azụmaahịa na-enweghị ntinye nke akụ aka gị. Agbanyeghị, ego ole ị nyere n’onyinye dabere n'ọnọdụ gị.
Mbinye ego n'aka onye na-ere ya
Na omume, onye na-ere ahia na-akwadoro ihe nzụta azụmaahịa nke onwere onye ga-esochi onye na-akwado onye na-azụ ahịa. A makwaara nke a dika ego mgbazinye ahia. Akụkụ nke onye na-ere ahia na-abụkarị karịa akụkụ onye na-azụ ahịa n'onwe ya na-enye. Na mgbakwunye, a na-ekwenyekwa na ya mgbe niile na a ga-akwụ ụgwọ na obere ego. A na-ewepụta nkwekọrịta ịgbazinye ego mgbe a na-akwadorịrị onye na-ere ahịa.
Chazụta nke mbak
Ọ ga-adịrị onye zụrụ ahịa iweghara mbak n’ụlọ ọrụ ahụ n’aka ndị na-ere ya n’ọhịa. Enwere ike ịhọrọ usoro nnata ego maka nke a. N'ihe banyere ndokwa ị na-akpata, ego a na-akwụ na-adabere na onye zụrụ ahịa ahụ rụpụtara nsonaazụ ụfọdụ. Agbanyeghị, nhazi a maka iweghachite azụmaahịa metụtara ihe egwu dị ukwuu ma ọ bụrụ na enwee esemokwu, dịka onye na-azụ ahịa na-enwe ike ịdabere nsonaazụ ụlọ ọrụ ahụ. Otu uru dịịrị onye na - ere ahia, n'aka nke ọzọ, nwere ike ịbụ na a na - akwụkwu ụgwọ ọrụ mgbe enwere ọtụtụ uru. N'ọnọdụ ọ bụla, ọ dị akọ na ịnwe nnwere onwe nke ahịa, ịzụta na ịlaghachi n'okpuru atụmatụ akwụ ụgwọ.
(N'ime) ndị na - etinye ego na - akwụ ụgwọ
Ego a na enweta ego nwere ike gbazie nbinye ego n'aka ndi na akwadoghi ego. Ndị na-etinye ego na-ezighi ezi bụ enyi, ezinụlọ na ndị maara gị. Ego ndị dị otú a bụkarị azụmaahịa nke ezinụlọ. Agbanyeghị, ọ dị ezigbo mkpa ịdekọ ego nke ọma n'aka ndị na-etinye ego na-ezighi ezi ka ọ ghara inwe nghọtahie ma ọ bụ esemokwu ga-ebilite n'etiti ndị ezinụlọ ma ọ bụ ndị enyi.
Na mgbakwunye, itinye ego site n'aka ndị na-etinye ego iji kwe omume. Ndị a bụ otu ndị na-enye ego nkwụ ụgwọ site na mbinye ego. Otu ọghọm dị na onye zụrụ ahịa ahụ bụ na ndị na-etinye ego na-abụkarị ndị na-eketa ụlọ ọrụ, nke na-enye ha njikwa ego. N'aka nke ọzọ, ndị na-etinye ego na-akwụ ụgwọ mgbe niile nwere ike itinye onyinye dị ukwuu na ihe ọmụma nke ahịa.
Cingzọ ego na-esiwanyewanyewanye ike bụ ịkpa ego. Na nkenke, ịba ụba pụtara na site na mgbasa ozi n'ịntanetị, a na-arịọ ọnụ ọgụgụ mmadụ ka itinye ego na nnweta gị. Mwepu nke igwe mmadụ, mana, bu ihe nzuzo; iji ghọta ìgwè mmadụ jupụtara, ịkwesịrị ịma ọkwa tupu ụlọ ọrụ ere.
Law & More ga - enyere gị aka ịchọpụta ohere ị ga-enweta n'ịzụta azụmaahịa. Ndị ọka iwu anyị nwere ike inye gị ndụmọdụ maka ohere enwere ike dabara na ọnọdụ gị ma nyere gị aka ịhazi ego ahụ.
You chọrọ ịma ihe Law & More nwere ike imere gị dịka ụlọ ọrụ iwu na Eindhoven? Kpọtụrụ ekwentị site na ekwentị +31 (0) 40 369 06 80 nke stuur een e-mail naar: mr. Tom Meevis, onye mgbasa ozi na Law & More - tom.meevis@lawandmore.nlmr. Maxim Hodak, onye nkwado na & More - maxim.hodak@lawandmore.nl